Ahoana ny fampidinana ny sary mihetsika iPhone 13 sy iPhone 13 Pro | Vaovao IPhone
Ahoana ny fampidinana ny sary mihetsika iPhone 13 sy iPhone 13 Pro
Isaky ny kinova vaovao an'ny iOS, Apple dia manolotra maromaro sary miavaka vaovao an'ny kinova vaovao, sary an-tsary sasany izay, raha tsy manana fotoana ahafahana manavao ny fitaovantsika isika (iOS 15 dia mifanaraka amin'ireo fitaovana mitovy amin'ny iOS 14), afaka maka sy mampiasa isika nefa tsy misy olana.
Miaraka amin'ny iOS 15, tsy ho faningana izany. Amin'ity lahatsoratra ity dia manolotra anao ny mety ampidino ireo sary vaovao izay avy am-pelatanan'ny kinova ambinifolo avy amin'ny iOS, sary nalaina izay nalaina tao amin'ny kinova Release Candidate, noho izany dia tsy kinalan'ny mpanakanto izy ireo matetika.
Ireo sary vaovao izay ao anatin'ny iOS 15 Misy totaliny 18, 8 amin'ny iPhone 13 Pro ary 10 an'ny iPhone 13 ary iPhone 13 mini. Etsy ambany dia asehonay rohy mivantana aminao hampidinana ny sary an-tsary rehetra amin'ny vahaolana am-boalohany, amin'ny alàlan'ny tranokala iDownloadBlog zazalahy.
1 Sintomy ny sary mihetsika iPhone 13 Pro
2 Sintomy ny sary iPhone 13
Sintomy ny sary mihetsika iPhone 13 Pro
Maody maody maoderina
Fomba maizina mavomavo
Fomba maody maizina volamena
Mode maizina mavo volafotsy
Sintomy ny sary iPhone 13
Miorina manga manga
Maody maizina maoderina
Maody maizina ao ambadika mena
Maody maizina ao ambadiky ny manga
Raha te hampidina ny fiaviana tsirairay amin'ny famahana azy tany am-boalohany avy amin'ny iPhone na iPad dia mila tsindrio fotsiny ny rohy tsirairay. Rehefa misokatra ny sary dia tsindrio ary tazomy amin'ny sary ilay rantsan-tànanao ary safidio Ampio amin'ny sary.
Raha hampiasa azy io ho toy ny sary an-tsaina, mandeha amin'ny fampiharana Photos ianao, safidio ny sary, tsindrio ny fizarana ary safidio ny Wallpaper. Farany, safidio raha tsy hampiasa azy io fotsiny ianao ho toy ny afovoan'ny efijery an-trano na koa ny efijery hidin-trano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Ahoana ny fampidinana ny sary mihetsika iPhone 13 sy iPhone 13 Pro
Apple dia mamela anao tsy hametraka ny iOS 15 raha tsy tianao